Ads प्रबन्धक अनुप्रयोग: तपाईको सबै मेट्रिक्स १ अनुप्रयोगमा | नि: शुल्क डाउनलोड
clever ads Google संग लग
निःशुल्क अनलाइन विज्ञापन उपकरण
आँखाको पलकमा Google Ads अभियानहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
Google Ads लागि सही कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्नुहोस्।
अडिट र तपाईंको Google Ads अभियान अप्टिमाइज।
तपाईंको प्रदर्शन अभियानहरूको लागि ब्यानर ads
तपाईंको Google Ads स्वचालित रूपमा कुनै भाषामा अनुवाद गरिएको छ।
अनलाइन विज्ञापन को लागि समायोज
हाम्रो प्रोमो कोड लागू गर्नुहोस् र नि: शुल्क Google Ads क्रेडिट पाउनुहोस्।
Microsoft Teams तपाईंको पीपीसी ads प्रदर्शन प्राप्त गर्नुहोस्।
Clever Ads प्रबन्धक
तपाईंको मोबाइल उपकरणबाट ads अभियानहरू हेर्नुहोस् र तुलना गर्नुहोस्।
डिजिटल परिवर्तन प्याक
स्क्राच देखि आफ्नो वेबसाइट बनाउन र निःशुल्क विज्ञापन सुरु गर्नुहोस्।
तपाईंको पीपीसी प्राप्त ads मा प्रदर्शन Slack ।
एड्-अन Google Sheets
Google Sheets तपाईंको पीपीसी विज्ञापन डाटा ल्याउनुहोस्।
Google कुराकानी बोट
गुगल च्याटमा तपाईंको पीपीसी ads
विज्ञापन एजेन्सीहरू लागि उपकरण अवश्य-छ।
Google संग लग
आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ एक ठाउँमा अभियान।
Clever Ads मोबाइल अनुप्रयोग मूल रूपमा तपाईको व्यवसायको लागि विज्ञापन प्रबन्धक हो। Google Ads , फेसबुक विज्ञापन, इन्स्टाग्राम विज्ञापन, माईक्रोसफ्ट विज्ञापन र ट्विटर विज्ञापनका लागि तपाईंको अनलाइन विज्ञापन अभियानहरू हेर्न र व्यवस्थित गर्न यसले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ। तपाइँको अभियान प्रदर्शन मा एक 360º रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस्। एउटा प्लेटफर्मबाट अर्कोमा जान जम्प गर्नुहोस्, तपाईंको फोनमा पूर्ण तुलना पाउनुहोस्। विज्ञापन प्रबंधन जस्तो कि तपाईले यो पहिले कहिल्यै देख्नु भएको छैन!
के हामी छुटकारा
तपाईंको Google Ads अभियान प्रदर्शन हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुधार गर्नुहोस्!
दुबै प्लेटफर्मको लागि तपाईंको सामाजिक ads
तपाईंको Microsoft Ads प्रदर्शन हेर्नुहोस् र यसलाई सुधार गर्नुहोस्!
तपाईंको ट्विटर ads अभियानहरू हेर्नुहोस्।
तपाईंको डिजिटल मार्केटिङ मञ्चहरूमा ट्रयाक प्रदर्शन
अघिल्लो अभियान आधारित उपाय परिणाम।
आफ्नो अभियान परिणाम सुधार गर्न व्यक्तिगत सुझाव प्रयोग गर्नुहोस्।
उन्नत Ads प्रबन्धक रिपोर्टिंग
अर्को एक मंच देखि जम्पिङ देखि थकित?
तपाइँको सबै डिजिटल मार्केटिंग अभियानहरू हेर्नुहोस् हाम्रो अग्रणी टेक्नोलोजीका साथ मात्र वा हाम्रो प्लेटफर्म प्यानल तुलनाको साथ। पूर्ण अप्टिमाइजेसनमा पुग्न हाम्रो निजीकृत सुझावहरूको साथ सबै अन्तर्दृष्टिहरू निकाल्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो Ads
के हाम्रो ग्राहकहरु भन्न
"मेरो मुख्य ads अभियानहरूको द्रुत तुलना। मँ मेरा अभियानहरू प्रदर्शन कसरी गरिरहेको छु भन्ने बारे स्पष्ट समझ लिनको लागि म सबै फिड प्राप्त गर्दछु। यो निस्सन्देह मैले कहिल्यै प्रयास गरेको सब भन्दा राम्रो ads"
लौरा ए.एन. Marchand
"यो अनुप्रयोग अभियान विश्लेषण र तुलना सुपर कुशल गरे र एक परेशानी को कम छ त्यसैले म, जाँदा काम। जाँच गर्न विभिन्न खाताहरूमा कुनै लग!"
Google Ads विज्ञ
"प्रयोग गर्न सजिलो! मैले मेरो फेसबुक र Google Ads खाताहरू र अब मलाई थाहा छ के अभियानहरू राम्रो प्रदर्शन गर्दै छन् र रूपान्तरणलाई नगदमा बदल्दै छन्। मेट्रिक्स अति उत्तम छ!"
Clever Ads प्रबन्धकको बारेमा अधिक
व्यवस्थित गर्नुहोस्, अनुकूलन गर्नुहोस् र तपाईंको Google Ads , फेसबुक विज्ञापनहरू, माईक्रोसफ्ट विज्ञापनहरू, इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू, र द गो मा ट्विटर विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई र तपाईंको व्यापार गर्न प्रस्ताव
लाभ, लाभ र प्रमुख सुविधाहरू
एक डेटा प्लेटफर्मबाट अर्कोमा हाम फाल्ने भएकोले तपाईको डेटा अवलोकन र विश्लेषण गर्न थकित हुनुहुन्छ? Google Ads , फेसबुक विज्ञापनहरू, माईक्रोसफ्ट विज्ञापन, इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू, र ट्विटर विज्ञापन अभियानहरू सबै एकै ठाउँमा प्रबन्ध गर्नुहोस् यो सजिलो हुन सक्दैन! यस तरिकाले, तपाईंसँग सँधै आफ्नो विज्ञापन रणनीतिको नियन्त्रण हुन सक्छ र तपाईंको नतीजा राम्रोसँग मापन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको अभियानको सबै मेट्रिकहरू तपाईंको फोन वा मनपर्ने उपकरणमा, एक ट्याबमा।
Clever Ads प्रबन्धक उत्तम नि: शुल्क हो (हो, तपाइँ त्यो सहि पढ्नुहुन्छ, पूर्ण नि: शुल्क) Google Ads अनुप्रयोग, फेसबुक विज्ञापन, इन्स्टाग्राम विज्ञापन, ट्विटर विज्ञापन, र माइक्रोसफ्ट विज्ञापनका लागि विज्ञापन अनुप्रयोग। Clever Ads प्रबन्धकको साथ सबैभन्दा धेरै सिर्जना गर्नुहोस्, अप्टिमाइज गर्नुहोस्, र “निचोड़” गर्नुहोस्। तपाइँको विज्ञापनहरू कसरी पूर्ण क्रस-प्लेटफर्म तुलनाको साथ प्रदर्शन गर्दै छन् भनेर देखाउनको लागि तपाइँको अभियानको प्रदर्शन र इभोलुसनको 360°० डिग्री अडिट प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंको सबै डाटा, एक ड्यासबोर्डमा, जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ, जे होस् तपाईं चाहनुहुन्छ। के यो अझ राम्रो हुन सक्छ?
प्रमुख सुविधाहरू तपाईं प्राप्त हुनेछ
Check your main metrics (spend, revenue, conversions and CPA, among others) on all advertising platforms where you are present: Google, Facebook, Microsoft, Instagram and Twitter, and be able to compare them easily. Have all your ad data and KPIs organized in fully customizable charts and graphs संगठित छ, तपाइँ के हेर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्, कुनै पनि समय, कहिँ पनि। तपाइँको विज्ञापन अभियानको प्रदर्शन को एक नजर एक नजर बाट नगरी एक नजर मा एक पूरा दृश्य प्राप्त गर्नुहोस्।
Google Ads खाता निर्माण : त्यो के हो? तपाईंसँग Google Ads खाता अझै छैन? कुनै समस्या छैन, हामी यसलाई तपाईको लागि केही क्लिकमा सिर्जना गर्नेछौं (हो, नि: शुल्क पनि)। र हामी एक Google Ads प्रोमो कोड सक्रिय गर्नेछौं तपाईका लागि गुगलफोरमा नि: शुल्क विज्ञापन सुरू गर्नका लागि! १२० अमेरिकी डलरसम्म Google Ads नि: शुल्क कूपन!
Google Ads अभियान बिल्डर : जस्तो हामीले उल्लेख गर्यौं, हामी तपाईंको Google Ads खोजी सिर्जना गर्ने ख्याल राख्छौं र easy सजिलो चरणहरूमा अभियान अभियान प्रदर्शन गर्दछौं ताकि तपाईं आँखा झिम्काएर गुगलमा विज्ञापन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
Google Ads अभियान र बजेट सिम्युलेटर : अझै पक्का छैन यदि तपाईं विज्ञापन सुरू गर्न चाहानुहुन्छ? गुगल विज्ञापन मार्फत तपाईंको लक्षित श्रोताको लागि पुग्न कति खर्च लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस् र सही निर्णय गर्नुहोस्।
तपाईंको Google Ads , फेसबुक विज्ञापनहरू, इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू र माइक्रोसफ्ट विज्ञापनहरू customized tips and tricks साथ तपाईंको विज्ञापनहरूको अप्टिमाइजेसन र प्रदर्शन सुधार गर्न सुधार गर्नुहोस्। उद्योगमा उत्तम विज्ञापन प्रबन्धक, नि: शुल्क, र निजीकृत।
हामी सिफारिस गर्छौँ भनेर श्रेष्ठ अभ्यासहरू
Clever Ads प्रबन्धकको अधिक प्रयोग कसरी पाउने?
हाम्रो Google Ads प्रबन्धक मोबाइल अनुप्रयोग तपाईंको नयाँ अनलाइन मार्केटिंग अभियान र विज्ञापन साझेदार हुन सक्छ। तपाईको विज्ञापन र डिजिटल मार्केटि strategy रणनीति माथि पूर्ण दृश्यता चाहिने धेरै विज्ञापन प्लेटफर्महरू जडान गर्नुहोस्: तपाईंको Google Ads , फेसबुक विज्ञापन, इन्स्टाग्राम विज्ञापन, ट्विटर विज्ञापन, र माईक्रोसफ्ट विज्ञापन अभियानहरू सबै एक ट्याब अन्तर्गत, पूर्ण रूपमा अनुकूलित ड्यासबोर्डमा पूर्ण नियन्त्रण गरिएको छ। । र सम्झनुहोस्, नि: शुल्कको लागि!
बिभिन्न विज्ञापन प्लेटफर्महरू बीच तपाईंको प्रदर्शन तुलना गर्नुहोस् र balance your budget and spend based on your campaign performance । के Google Ads फेसबुक विज्ञापन भन्दा बढी रूपान्तरण भइरहेको छ? के इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू माइक्रोसफ्ट विज्ञापनहरू भन्दा सीपीए रिपोर्ट गर्दैछ? कुन अभियानले उनीहरूलाई धक्का दिन अझ राम्रो प्रदर्शन गर्दैछ? के मैले कुनै रोक्नु पर्छ किनकि उनीहरू राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्?
Google Ads खाता बनाएर र हाम्रो अनुकूलन सुझावहरू र चार्टहरूको साथ अभियानहरू हराउँदै तपाईंको रणनीति र बिक्री बढाउनुहोस्। नयाँ दर्शकहरू र सम्भावित ग्राहकहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंले विचार गर्नुभएन र इन्टरनेट मार्फत उनीहरूमा पुग्नुभयो, हाम्रो सहायताले यो गाह्रो हुनेछैन। थप रूपमा, हाम्रो सतर्कताको लाभ उठाउनुहोस् र तपाईंको अभियानहरू र विज्ञापनहरूमा हुने कुनै पनि कुरा छुटाउँनुहोस्। यी सतर्कताहरूको साथ तपाईं सबै सम्भावित अप्रत्याशित घटनाहरूमा नजर राख्नुहुनेछ, र यदि तपाईंको अभियानहरूमा केही असामान्य घटना भयो भने ... हाम्रो सतर्कताहरूले तपाईंलाई चेतावनी दिन्छ!
Ads प्रबन्धकको सल्लाह र सिफारिसहरू लागू गरेर तपाईंको विज्ञापन अभियानहरू अपडेट र अप-टु-डेट राख्नुहोस्। तपाईंको विज्ञापन बजेट खेर फाल्ने बेवास्ता गर्नुहोस्।, समय र पैसा बचत गर्नुहोस् र दिमागको शान्ति प्राप्त गर्नुहोस्।
Ads सिर्जनाकर्ता: हामी तपाईंको अभियानहरू निःशुल्क बनाउँछौं
Google Ads खाता छैन? थाहा छैन कहाँ सुरु गर्ने? यदि तपाईंसँग यस प्रकारको शंका छ र / वा तपाईंको बजेट सीमित छ ... हाम्रो विज्ञापन प्रबन्धक र अन्य उपकरणहरू तपाईंको लागि डिजाईन गरिएको छ भने, यसलाई जाँच गर्नुहोस्! हामी तपाईंलाई गुगल अभियानमा हाम्रो विशेषज्ञतामा मद्दत गर्न चाहन्छौं, तपाईंको लागि उनीहरूलाई सिर्जना र अनुकूलन (पूर्ण नि: शुल्क)।
हाम्रो मद्दतको साथ तपाईं आफ्नो Google Ads Clever Ads प्रबन्धक मार्फत सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ स्वचालित रूपमा र सबै गुगल मापदण्डहरू अनुरूप। केवल--चरण प्रक्रियामा जानुहोस् जहाँ हामी तपाईंलाई केहि प्रश्नहरू सोध्ने छौं: तपाईंको व्यवसाय, तपाईंको खाता, तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको बारेमा जानकारी, तपाईंको प्रस्ताव, सेवाहरू र दैनिक बजेट तपाईं आफ्नो विज्ञापनमा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ ... र हामी बन्द जाऊ!
हाम्रो विज्ञापन बिल्डर १००% नि: शुल्क छ र तपाईले छनौट गर्नुभएको बजेट पूर्ण रूपमा क्लिकमा खर्च गरिन्छ जुन तपाईले ads प्रदर्शन गरेर पाउनुहुनेछ, हामी एउटा पैसा पनि पाउँदैनौं। थप रूपमा, यदि तपाईं Google Ads नयाँ हुनुहुन्छ भने, हामीसँग शुरुआती १२० अमेरिकी डलर छुट छ (तपाईंको देशको मुद्रामा निर्भर गर्दै) जुन तपाईंको खातामा प्रबर्धन-सम्बन्धी कोडको रूपमा सक्रिय हुनेछ ताकि तपाईं नि: शुल्क गुगलमा विज्ञापन सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै चाल र १००% सुरक्षित छैन! हामी एक प्रिमियर गुगल पार्टनर हो, त्यसैले तपाईले कुनै कुराको चिन्ता लिनुपर्दैन, हामी वचन दिन्छौं। र यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न वा सरोकार छन् भने, तपाईं जहिले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो Google Ads विज्ञहरू (हाम्रो खाता व्यवस्थापकहरू) तपाईंलाई सहयोग गर्न र तपाईंलाई आवश्यक सबै चीजमा मद्दत गर्न खुशी हुनेछन्।
तपाईंको Google Ads अभियानहरू स्वचालित रूपमा Clever Ads प्रबन्धक मार्फत सिर्जना गरिएको छ। तपाईं--चरण प्रक्रियामा जानुहुनेछ, जहाँ हामी तपाईंलाई लक्षित गर्न चाहने दर्शकहरू, तपाईंको प्रस्ताव, सेवाहरू, र दैनिक बजेट तपाईं आफ्नो विज्ञापनमा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा सोध्नेछौं।
हाम्रो ads निर्माता १००% नि: शुल्क छ र तपाईंको छनौट गरिएको बजेट गुगलमा ads Google Ads नयाँ हुनुहुन्छ भने, Clever Ads तपाईंको खातामा प्रोमो कोड पनि सक्रिय गर्दछ ताकि तपाईं गुगलमा नि: शुल्क विज्ञापन सुरू गर्नुहोस्।
Clever Ads Google Ads , फेसबुक विज्ञापनहरू, इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू, र माइक्रोसफ्ट विज्ञापनहरूमा हराइरहेको वा अन्डरपरफॉर्मिंगको ठीक रूपमा बताउँछ।
तपाइँ बिभिन्न विज्ञापन प्लेटफर्महरूमा तपाइँको प्रदर्शन सुधार गर्न के गर्न आवश्यक छ भन्नेमा तयार-उपयोग-टिप्स पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। Clever Ads प्रबन्धकले तपाइँको प्रदर्शनलाई केवल एक क्लिकमा बढाउन मद्दत गर्दछ।
लाभ नियन्त्रण र अनुकूलन परिणाम।
तपाईंको अभियानहरू Clever Ads अनुप्रयोग मोबाइल अनुप्रयोगको साथ निःशुल्क प्रबन्ध गर्नुहोस्! यसलाई अब एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि स्थापना गर्नुहोस्।
Clever Ads तपाइँको अनुभव सुधार गर्न, सामग्री र विज्ञापनहरू निजीकृत गर्न, सामाजिक मिडिया सुविधाहरू प्रदान गर्न, र हाम्रो ट्राफिकको विश्लेषणको लागि कुकीहरू जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दछ। हाम्रो वेबसाइटमा यस प्रविधिको प्रयोगमा सहमति जनाउन तल क्लिक गर्नुहोस् - र चिन्ता नलिनुहोस्, हामी आफ्नो गोपनीयताको सम्मान।
Clever Ads ब्लग
Clever Ads गर्वको प्रिमियर गुगल पार्टनरहरू हुन्
Clever Ads द्वारा बनाइएको - २०२१